FINONA SILAMO : Notsarovana tamin’ny fizarana rano mangatsiaka ny nahafatesan’i Imam Houssen
Nanoloana ny fiantsonan’ny fiara rezionaly etsy Ampasika no nananganana ny trano heva nizaràna ny rano fisotro mangatsiaka tamin’ireo rehetra nandalo io toerana io. 11 septembre 2019
Hetsika fanao isan-taona nandritra ny telo andro no nanaovana izany tamin’iny taon-dasa iny, dia nokendrena ho nifanojo tamin’ny andro fahafolon’ ny volana Moharamo izany tamin’ity taona ity araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra, izay sady andro nahafatesan’ilay zafikelin’ ny mpaminany Mohamad. Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana izy, ka natao fehirano tsy nahazo nisotro rano sy nisakafo hatramin’ny fialan’ ainy tao an-tendrombohitr’i Karbala ny andro fahafolo ny volana Moharamo tamin’ny taona faha-60 nifindran’ny mpaminany Mohamad monina.
Raha zohina ny tantara dia nisy ny fanenjehana mafy nahazo ny finoana Islamo tamin’izany, ka tafatsoaka nandositra ny mpaminany, ary ireto zafikeliny no niharan’ny rihatra nampijaliana mafy, hoy i Cheick Moustapha Nasser, mpampianatra ao amin’ny madresady Al qaem Ambovoalanana.
Koa natao ho fahatsiarovana ity zafikely faharoan’ ny mpaminany Imam Houssen ity, izao fizaràna ny rano mangatsiaka hanonerana ny rano tsy azo nosotroiny tamin’io famonoana azy io. Ireto mpianany taty aoriana izay nahatsiaro fa fiainana ny rano, ka izany no anton’ity hetsika fizaràna maimaim-poana fanao isan-taona manerana izao tontolo izao ity fa tsy ny eto Mahajanga ihany. Ho fanehoana ny fiaraha-miory amin’ireo fianakavian’ny mpaminany no tena voizina tamin’izao hetsika natao izao, hoy hatrany ny mpikarakara, ary dia hotohizina isan-taona ity hetsika ity raha mbola velona koa ny finoana islamo.